तीन महिनादेखि तलब पाएनन् अस्पतालका कर्मचारीले | नेपाली पब्लिक तीन महिनादेखि तलब पाएनन् अस्पतालका कर्मचारीले | नेपाली पब्लिक
तीन महिनादेखि तलब पाएनन् अस्पतालका कर्मचारीले
admin २०७६, १ जेष्ठ बुधबार १३:५४
धनगढी – सुदूरपश्चिमका अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। संघीय सरकारबाट बजेट नआएका कारण उनीहरुले तलब नपाएका हुन्।
अस्पतालहरु प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि पहिलो वर्षको तलब भने संघीय सरकारले नै पठाउनु पर्ने निर्णय भएको छ। रकम समयमै नआएका कारण सुदूरपश्चिममा आमा सुरक्षा कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको छ। नेपाल सरकारले अस्पतालहरुलाई हरेक पटक प्याकेजमा पैसा पठाउने गरको छ।
प्याकेजमा रकम पठाउँदा ती कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कर्मचारीसमेत नियुक्त हुन्छन्। सरकारले पठाएका प्याकेज कार्यक्रमसँगै अस्पतालका महत्वपूर्ण कामहरु सञ्चालन गर्न रकम अभाव भएपछि कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या त देखिएको हो। ‘कर्मचारीहरुले तीन महिनादेखि तलब खान पाएका छैनन्,’ सेती अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. हेमराज पाण्डेयले भने।
सेती र महाकाली अस्पतालमा पनि पैसाको अभावमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावित भएको र कर्मचारीले तलब नै खान नपाएको देखिएको छ। महाकाली अस्तालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट डा. हरिकुमार श्रेष्ठले कर्मचारीले तलव खान नपाएको तीन महिना पुगेको बताए।
संघीय सरकारले बजेट भाषणमा आमा सुरक्षा कार्यक्रममा पाइने सुविधा दोब्बर बनाएको छ। तर तल्लो निकायमा रकम पठाउँदा भने पुरानै प्याकेज अनुसार पठाएपछि सरकारले पठाएको रकम माघ महिनामै सकिएको छ।
दोस्रोपटक पठाएको पैसासमेत अपुग भएपछि अहिले आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा समस्या भएको सुदूरपश्चिम स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश मलासीले बताए। उनले हाल आमा सुरक्षा कार्यक्रममा लागि प्रदेशभर ६ करोड रुपैयाँ अपुग भएको जानकारी दिए।
ज्येष्ठ नागरिक, गरीब तथा असहायका लागि गरिएको निशुल्क औषधि वितरण तथा उपचारका लागिसमेत रकम अपुग छ। यो कार्यक्रमका आएको रकम गत आर्थिक वर्षभन्दा चालू आर्थिक वर्ष शुरुआतमै २२ लाख घटेर आएको सेती अस्पतालका मेसु डा. पाण्डेले बताए। यस्तै महाकाली अस्पतालमा यो रकम हरेक आर्थिक वर्षमा निरन्तर घटेर आइरहेको मेसु डा. श्रेष्ठले बताए।
अस्पतालहरुमा पठाउने रकम अपुग हुँदा बिरामीहरुले समेत समस्या झेलिरहेका छन्। अस्पतालहरुले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत यातायात खर्च दिन नसक्दा बिरामीहरुका आफन्तहरुले झगडासमेत गर्ने गरेका छन्।